Raymond Mill - Tanzania Bread
Raymond Mill, Shanghai XSM dia fitaovam-pambolena matihanina matihanina, Raymond Mill, fitaovana fiarovana ara-tsakafo, orinasa mpanamboatra milina fanontam-bary. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny voalohany bande conveyor, vibrating feeder, fitaovana fandefasana entona handefa ny jaw crusher, impact crusher, hydraulic crusher dia harona matevina matevina, ary faharoa amin'ny a jawcrusher kely, hammer crusher Fitrandrahana harena ankibon'ny tany faharoa tadin efijery Ny fihaonana amin'ny mari-pamantarana maromaro amin'ny ore dia entina mankany amin'ny baolina baolina, ultrafine mill ert magnetic separators, flotationmineral machine dia mifidy karazam-pahalalana maro samihafa. Mazava ho azy, fa fanodinana fitrandrahana harena ankibon'ny tany fotsiny ity, Shanghai XSM mifototra amin'ny karazan-kira misy anao fitaovam-pako izay mifanandrify tsara anao, raha manana fanontaniana ianao, dia miangavy anay hifandray aminay na tsindrio ny tsara eo amin'ny sehatry ny famolavolana, ny mpiasa ara-teknika dia manome anao valiny amin'ny antsipiriany.
Ny orinasa dia mamokatra ny Raymond mill Azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, indostria simika, fitaovam-pambolena, metallurgy ary faritra hafa manodina. Afaka manamboatra quartz, feldspar, calcite, talc, baritse, fluorite, tany tsy fahita firy, marbra, seramika, bauxite, manganese ore, vy, varahina, loharanom-panafitran'ny fôsily, ny ambaratongany anatiny ambany noho ny fito degrees ary ny rano kely noho ny 6 %. Ny haben'ny farany dia azo fehezina amin'ny 0.044 mm ka hatramin'ny 0.125 mm eo anelanelany, satria manana ireo toetra ireo izy ireo miaraka amin'ny 100 mesh ~ 325 mesh azo ampitahaina.
1. Io no rafitra matanjaka, mandrakotra ny faritra madinika, dia rafitra fananganana tsy miankina avy amin'ny fitaovana fototra mankany amin'ny vovony farany.
2. Ny fahamendrehan'ny vovoka farany dia azo zaraina, ny 99% amin'izy ireo dia afaka mamakivaky ny efijery, sarotra ny manatona ny milina fanodina hafa.
3. Ny fitaovan'ny fitaovam-piadiana Raymond Raymond dia manamboatra trondro sy kitapo mivaingana, fikolokoloana miorina sy asa be voninahitra.
4. Ny ampahany manan-danja dia miorina amin'ny vy, ny fanamafisana ny fifehezana ny fanamafisana ny habetsaky ny fitaovana enti-manify, ny masinina iray manontolo dia manana fiakarana avo ary manana asa azo itokisana.
5. Ny rafitra elektrônika dia mifehy ny fifantohana amin'ny fifantohana, ny atrikasa dia afaka mahatsapa ny asa tsy misy olona, ​​ary ny maintance, sns.
Tabilao momba ny Raymond Mill:
Sakafo (mm) Vita vita
(MG) Main Power Powder
(MG) Afovoany (mm) Haavo
Fanamarihana: Io famaritana io dia famakafakana fotsiny, ny fanovana rehetra dia miankina amin'ny vokatra avy amin'ny rameva.
Voalohany indrindra, ny fitaovam-pitaovam-pako dia nopotehin'ny labozia ho an'ny habeny, ary avy eo dia natsofoka tao anaty fanatobiana izay nampindrana ilay fitaovana tamin'ny alalan'ny fitaovana elektrika-magnetic vibrating amin'ny fomba mahazatra sy mandroso hatrany ao amin'ny efitra fisakafoanana ho an'ny fanodinana poids. Ny haavon'ny rindrina dia mivoaka avy any ivelany mba hanosotra ny peratra noho ny hery afindrany ary ny fitaovam-pandrefesana dia manangona ny fitaovana, alefaso eo afovoany eo anelanelan'ny peratra sy ny milina mba hanatontosana ny fametahana. Rehefa vita ny fanodinana, dia haverin'ny rivotra avy amin'ny fan Miverina ao amin'ny efitra fisakafoanana izy ireo mba hanamboarana azy ary hodiovina amin'ny rivodoza ny mpanangom-bokatra tsara ary handraraka amin'ny tavoahangy mpanodina toy ny vokatra farany.
← Famonoana mofomamy fanoherana mahery vaika